Tambajotran-dahalo ravan’ny zandary: maty voatifitra i Zaman’i Fola, naman’i Del Kely | NewsMada
Tambajotran-dahalo ravan’ny zandary: maty voatifitra i Zaman’i Fola, naman’i Del Kely
Par Taratra sur 06/05/2019
Rotiky ny balan’ny zandary tao Belavenona fokontany Antsapanana Anosikely, kaominina ambanivohitr’i Tsararano, distrikan’i Maevatanana, ny asabotsy teo ilay dahalo raindahiny antsoina hoe Tsaramiandry Velonaina Mahatombo Fernand, fantatra amin’ny solon’anarana hoe Zaman’i Fola, naman’i Del Kely…
Araka ny angom-baovao avy amin’ny zandarimaria nohamafisin’ny fampitam-baovao avy amin’ny mpitondra tenin’ny governemanta, ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina , nahazo vaovao momba ny fisian’ireto andian-dahalo ireto tao amin’ny zohy sy kizo fieren’ireo dahalo ny zandary ka nidina haingana tany an-toerana. Hita tao amin’ireto kizo ireto i Lebedahara tanàn-kavanan’i Zaman’i Fola. Voasambotry ny zandary tao amin’ity kizo ity ny dahalo telo sy vehivavy roa (Lebedahara, Tsaramiary zandrin’i Zaman’i Fola na i tsy maty môtro, Randriamanampisoa Jean Edmond, Florida ary Fitiavana) miaraka amin’ny basy Kalachnikov “serie OE 4538 sy chargeurs roa ary basimborona marika Falcor, calibre 12 miaraka amin’ny bala fito izay fampiasan’i Zaman’i Fola sy odigasy marobe. Nandritra io fifandonana io anefa dia tafatsoaka i Zaman’i Fola ka nihamafy hatrany ny fikarohana nataon’ny zandary. Taorian’ny fanomezam-baovao avy amina olona iray no nahafantaran’ny zandary fa nandray taksiborosy tao Ambondromamy i Zaman’i Fola ka notratrarina tao Maevatanana. Tratra niaraka tamin’ny koa ny balana Kalachnikov miisa efatra calibre 7,62 ary odigasy maro samihafa, telefaonina finday ary “puce” miisa telo.
Nikasa hitsoaka i Zaman’i Fola…
Nohamafisin’ny mpitondra tenin’ny governemanta hatrany fa i Zaman’i Fola dia mpiara-dia ao anatina tambajotrana mpaka an-keriny miaraka amin’ilay dahalo raindahiny antsoina hoe Del Kely izay nanao ny asa ratsiny nandritra taona maro tao Tsaratanàna, Andriamena, Ambato-Boeny. Mbola karohina i Del Kely ary manolotra tambiny 20 tapitrisa Ar ho an’izay manam-baovao momba azy ny fanjakana. Nikasa hitsoaka teny an-dalana raha nitondra azy tany amin’ny toerana niafenan’ireo dahalo hafa i Zaman’i Fola rehefa avy nikasi-tanana ny iray tamin’ireo zandary. Voatery nampiasa ny fitaovana teo am-pelatanany ny zandary ka namoy ny ainy ny alin’ny asabotsy teo izy.